Bannaanka La Qaadan Karo Oo Baaxad Leh 25L Bag
Bacda qubeyska isboortiga ee baaxad weyn, 25 litir oo awood ah si aad u daboosho baahiyahaaga. Waxyaabaha PVC, xirashada u adkaysta, adkeysi leh oo aan fududeyn da'da. waara Tani runti waa shey kor u qaadaya farxadda cayaaraha banaanka.
Lambarka Shayga: BTC097
Boorsada cusub ee Cawl-Weyn oo baaxad weyn leh
Shandad gacan-biyood oo awood-weyn leh, oo ka samaysan maadadda mesh-ka ee mesh-ka ah, oo aan biyuhu xirin, isla markaana u adkaysta xirashada, ma fududa in waxyeello la gaadhsiiyo. Waxaa jira seddex qeexitaan oo ah 20L, 40L, iyo 60L si loo daboolo baahiyahaaga safarka ee kaladuwan. Bacda biyuhu ka soo baxaan ee ku habboon duruufaha kaladuwan sida buur fuulista, safarka, jir dhiska, tababarka, iwm.
Lambarka Shayga: LXD0200202002
Awoodda: 20L / 40L / 60L
Midab: Midab buluug / midabaysan
Isticmaal: Safarka dibadda
Feature: Biyo la'aan